ဘာကြောင့် အိပ်မက်ဆိုးတွေ မက်ရတာလဲ - YOYARLAY Digital Media and News
အိပ်မက်ဆိုးတွေက အတော်လေးကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းသလို အထိတ်တလန့်ဖြစ်စေပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကြည့်ခဲ့တဲ့ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကြောင့် အိပ်မက်ဆိုးမက်နိုင်သလို ကျွန်မတို့ လုပ်လိုက်တဲ့အလေ့အထတွေကြောင့်လည်း အိပ်မက်ဆိုးမက်နိုင်ပါတယ်။ မကြာခဏ အိပ်မက်ဆိုးတွေမက်နေပြီဆိုရင် ဘယ်လိုမျိုးအလေ့အထတွေလုပ်မိလို့ ဖြစ်တာလည်းဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်…။
ကျွန်မတို့ကို အိပ်ပျော်အောင် ကူညီပေးတဲ့ဆေးတွေက တကယ်တော့ အိပ်ချိန်ကိုလည်း အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အိပ်ဆေးတွေက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝအိပ်ချိန်စက်ဝန်းကို နှောင့်ယှက်ပေးနိုင်ပြီး အိပ်စက်ဖို့အတွက် ဆေးကိုပဲအရမ်းအားထားမိစေတယ်လို့ လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာဝန်ညွှန်တဲ့ပမာဏလောက်ပဲ အိပ်ဆေးကိုသောက်သုံးပေးပါ။
ညအိပ်ရာမဝင် အရက်တစ်ခွက်(သို့) နှစ်ခွက်သောက်သုံးမယ်ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်ကို ပေါ့ပါးသွားစေပြီး နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်စေတယ်ဆိုတာကို ကြာဖူးကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒါကအကြောင်းရင်းမဟုတ်ပါဘူး။ အရက်က ဦးနှောက်ကိုအားဖြည့်ပေးနိုင်ပြီး လန်းဆန်းတက်ကြွစေတဲ့အတွက် ရလဒ်အနေနဲ့ အိပ်ပျော်လိုက်မပျော်လိုက်ဖြစ်စေပြီး ကြောက်မက်ဖွယ်ရာအိပ်မက်ဆိုးတွေမက်လာနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့အိပ်တဲ့ပုံစံက အိပ်စက်ခြင်းကို သက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ပက်လက်လှန်ပြီး အိပ်ခြင်းက လေဝင်အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့သွားစေနိုင်ပြီး အိပ်စက်ဖို့ခက်ခဲစေပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ အသက်ရှုမဝသလိုခံစားရပြီး အိပ်မက်ဆိုးတွေမက်လာနိုင်ပါတယ်။
လူကလည်းပင်ပန်းနေပြီ။ ဒါပေမဲ့ တီဗီလည်းကြည့်ချင်သေးတယ်ဆိုပေမဲ့ တီဗီပိတ်ပြီး အိပ်ရာဝင်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ တီဗီကြည့်နေပေမဲ့ ပင်ပန်းနေတာကြောင့် ရုတ်တရက်အိပ်ပျော်သွားတက်ပြီး အိပ်မက်ဆိုးမက်နိုင်ချေရှိပါတယ်။ ညပိုင်းနောက်ကျမှကြည့်တဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာဇာတ်ကားတွေကလည်း အိပ်မက်ဆိုးတွေမက်စေပါတယ်။ တစ်ခုခုနဲ့ အပန်းဖြေချင်ရင်တော့ စာအုပ်ဖတ်လိုက်ပါ။
အိပ်မက်ဆိုးတွေမက်စေတဲ့ နောက်ထပ်အကြောင်းအရင်းကတော့ အချိန်အကြာကြီးအိပ်စက်ခြင်းပါပဲ။ အချိန်အကြာကြီး အိပ်စက်ခြင်းက ပုံမှန်အိပ်စက်တဲ့ပုံစံကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပြီး အိပ်မက်ဆိုးမက်ဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ အကြောင်းအရင်းဖြစ်စေပါတယ်။ နေ့တိုင်း အိပ်ချိန် (၇-၈) နာရီ ရှိမယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးအိပ်စက်ခြင်းပါပဲ။
အိပ်မက်ဆိုးမက်စေတဲ့အလေ့အထတွေကိုရှောင်ကျဉ်ပြီး နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်စက်ရင်း အိပ်မက်လှလှမက်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
Ref: Having nightmares? These habits might not be letting you sleep!
Previous Previous post: အော်စကာဆုမရခဲ့ဖူးတဲ့ ကမ္ဘာကျော်သရုပ်ဆောင် (၅) ဦး
Next Next post: လကမ္ဘာပေါ်မှာထားရှိမယ့် လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အလုံးစုံသောအသိပညာများ
ရိုးရာလေးရဲ့ အပတ်စဉ် စာအုပ်အညွှန်းကဏ္ဍလေးကို တင်ဆက်ဖို့ အချိန်ကျလာပြန်ပါပြီ။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Post Views: 2,537